क्वाड (चार लेन्स) क्यामेरा सेटअप सहितको स्याओमी रेडमी नोट सिक्स प्रो नेपाली बजारमा
२०७५ मंसिर २० बिहीबार १८:५८:००
काठमाडाैं । नेपाली बजारमा क्वाड क्यामेरासहितको रेडमी नोट सिक्स प्रो सार्वजनिक भएको छ । सर्वाधिक लोकप्रिय रेडमी नोट फाइव एआईलाई अपग्रेड गरी रेडमी नोट सिक्स प्रो नेपाली बजारमा आएको हो ।
यसमा १९ः९ नट्च सहितको डिस्प्ले, डुअल सेल्फी क्यामेरा र थप सुधारिएको रियर क्यामेरा सेटअप छ ।
ओभरसिज एक्सपान्सन, इन्डियन सवकन्टिनेन्ट, स्याओमीका प्रमुख संकेत अग्रवालले भने, “रेडमी नोटले उपभोक्ताहरुको विश्वास जित्न सफल भैसकेकोछ । रेडमी नोट फाइव एआई शक्तिशाली डुअल क्यामेरासहितको स्मार्ट फोन हो । जसले एमआई उपभोक्ताको विश्वास जितेको थियो र यसलाई उच्च प्रविधिसहित परिमार्जित गरी सिक्स प्रो ल्याएका हौं ।”
रेडमी नोट सिक्स प्रो–क्वाड (चार लेन्स) क्यामेरा, नट्च डिजाइन रेडमी नोट सिक्स प्रो, क्वालकोम स्न्यापड्रागनले आधुनिक तवरबाट डिजाइन गरेको हो र जसमा ६३६ अक्टाकोर प्रोसेसर, एआई पावर्ड क्वाड क्यामेरा सेटअपसहित दुईदिनसम्म चल्ने ४ हजार एमएएच ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ ।
यसमा उच्च गतिमा चल्ने एलपिडीडीआरफोरएक्स ¥याम प्रयोग भएको यो फोन अत्यन्त शक्तिशाली भएको कम्पनीले जनाएको छ । अकल्पनीय सेल्फीको अनुभव दिने रेडमी नोट सिक्स प्रोको अगाडि २० मेगापिक्सेल +२ मेगापिक्सेल एआई क्यामेरा जडित छ ।
रेडमी नोट सिक्स प्रोमा १९ः९ एसपेक्ट रेसियो र नट्चसहितको ६.२६ इन्च एफएचडी +आईपीएस डिस्प्ले रहेकोछ भने यसलाई कर्निङ्ग गोरिल्ला ग्लासले सुरक्षा दिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
५०० निट ब्राइटनेसले चर्काे घाममा पनि सजिलै स्क्रिन हेरि आफ्नो फोन चलाउन सकिन्छ । रेडमी नोट सिक्स प्रोको उत्कृष्ट डिजाइनले यसलाई आकर्षक बनाउनुका साथै यसको हाडब्रिड डुअल सिमस्लटबाट मेमोरी बढाउने सुविधा समेत रहेको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
रेडमी नोट सिक्स प्रोको हरेक उपभोक्ताले सफ्ट फोन कभर पाउन सक्नेछन् भने रेडमी नोट सिक्स प्रो ३ जीबी +३२ जीबी र ४ जीबी + ६४जीबीमा उपलब्ध छ भने यसको मुल्य रु. २४ हजार ९९९ र रु. २८ हजार ९९९ रहेको छ ।